Umatshini wokumakisha weKhabhinethi yeLaser
Umatshini wokumakisha we-laser ohlukeneyo
inshorensi umatshini laser yokumakisha
Umatshini wokumakisha we-laser ephathekayo
Iingcebiso zokuthenga umatshini wokusika / wokukrola we-laser
Inyathelo 1: Umba wokuqala yinkxaso. Kuninzi ukungenisa okungabizi kakhulu, ikakhulu okuvela eChina, kwintengiso. Kodwa ii-lasers ngoomatshini abanzima kwaye bayaphula kwaye bafuna ukulungiswa. Qinisekisa ukuba inkampani oyithengayo ithembekile kwaye inikezela ngenkxaso elungileyo kuwe nakumatshini wabo emva kokuba uyithengile ....
I-Laserartist CO2 oomatshini bokukrola i-laser banikezela ngeendlela ezahlukeneyo. Eyona nto ibhetyebhetye kune-engravers yomatshini okanye oomatshini bokugaya, i-CO2 laser engravers inokukhawuleza kwaye ngokulula yenza ngokwezifiso izinto ezenziwe ngomthi kunye neemveliso, ukukrola iiglasi okanye iikomityi zeceramic, etch elityeni okanye kwiplastikhi, phawula isinyithi isale ...
5 Izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho wokumakisha umatshini wokumakisha we-laser
Ukusebenza komatshini wokumakisha we-laser kuya kuncipha kancinci emva kokuba kusetyenziswe ixesha elide. Ibangelwa yintoni le nto? Zeziphi izinto eziphambili ezichaphazela umgangatho wokumakisha umatshini we-laser? 1. Indawo ekugxilwe kuyo kumatshini wokumakisha we-laser Indawo ekugxilwe kuyo ngophawu lwelaser ...
Ukhetho kumatshini ngentlabo laser
Kwiminyaka eyadlulayo, umatshini laser, nokukrola unako ukwenza kuphela nokukrola ifomathi encinci ngenxa yokusikelwa umda zobugcisa. Ngohlaziyo oluqhubekayo kunye nophuhliso lwetekhnoloji, ulawulo lwebhodi yomama evelisiweyo ngoku inokuxhasa ukuxhonywa kwefomathi enkulu. Ngenxa yoko, uqwalaselo olusezantsi lwe-laser lokukrola / ...
Izinto ezichaphazela ixabiso lomatshini wokusika we-laser
Izinto zexabiso lemveliso: ngokubanzi, indleko zemveliso ayisiyomathiriyeli kunye noomatshini kuphela, kodwa iR & D, QC, emva kwenkonzo yokuthengisa, indleko zabasebenzi, iindleko zoluhlu, indleko zemali njalo njalo. Ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba zeziphi izinto onomdla kuzo. Xa ukhetha umgangatho, ...
Ukusetyenziswa komatshini wokusika we-laser
Laser nokukrola abenzi umatshini ukusika. Umatshini wokusika we-Laser lokukrola yinto ephezulu-yeemveliso, eyi-optical, mechanical, imveliso yokudibanisa umbane. Kunye nophuhliso ngempumelelo laser, nokukrola iteknoloji, ishishini waqalisa ukuphuhlisa ngokukhawuleza. Ukuza kuthi ga ngoku, isicelo o ...
1 # Lvting Rd, Isitalato iCangqian, Isithili saseYuhang, isiXeko saseHangzhou, China. 310023